Indlwane kaRobin. - I-Airbnb
Ufuna iholide yeveki!! Le iya kuba yindawo entle yokuhlala.
Lo mgangatho uphantsi umhle uphume ngeengcango eziya kukukhupha uphefumle uthatha indawo yangaphandle kunye nomlambo iDes Moines uhamba ngasemva kweyadi. Kukho iigadi zeentyatyambo ezintle onokuthi uhambe kuzo, kunye nedama elikhulu lokuqubha okanye uvumele umntwana wakho oboya ukuba adade okanye uhlale ecaleni kwaye umamele nje ingxangxasi, iintaka zicula okanye zibone ixhama lihamba.
Ndikwanofikelelo kwiinkampu kunye neentente zendibano enkulu, oku kuya kuba yintlawulo eyongezelelweyo.
Ukuba uzingela ukuza kwakho ndikwiyadi kuphela ukusuka kwindawo enkulu yokuzingela ye-DNR.
Kukho iindledlana ezilungisiweyo zeemoto zekhephu kufutshane, kunye ne-skiing enqumla ilizwe.
Ngo-2021 ndizakuqala ukuhlawulisa izinja zakho nje zibabale njengomntu omnye, ke ukuba kukho ababini kuni kunye nenja yakho (enye okanye ezimbini) kuya kubakho undwendwe olu-3. Kundithatha kabini ixesha elide ukucoca iinwele zenja kuyo yonke into kwaye ndihlala ndiphinda ndityale ingca kwiindawo, UTHANDO ukubona umntwana wakho woboya, kodwa ndiyathemba ukuba uyayiqonda.
Enkosi kwaye ndiyathemba ukudibana nawe.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, iisofa ezikwazibhedi eziyi-3, oomatrasi abampontshwayo abayi- 2, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-3
Bonisa zonke 87 izinto onokuzisebenzisa
4.79 · Izimvo eziyi-108
Asinavenkile yokutya apha kodwa kukho isikhululo segesi/ ivenkile eluncedo edolophini. UCurrie ukwanepaki onokusa kuyo abantwana kwaye ube nexesha elimnandi, unokudlala ibhola epickle apho, izihlangu zamahashe, ibhola yebhasikithi kunye nentenetya. Ukuba ngamachibi aseShetek owafunayo, akude ngeemayile ezimbalwa kuphela.
IShetek state Park ikude ngeemayile ezi-3 ukuze ukwazi ukurenta (amaphenyane, iibhodi zokubhexa. Izikhitshane zokubhexa, iikayaks kwaye kukho nevenkile yezipho apho.
Umgama oziikhilomitha ezingama-37 kukho iiJeffers Petroglyphs
Iikhilomitha ezingama-20 ukusuka ekhaya likaLaura Engles Wilder kunye nemyuziyam, iPageant iya kuba ngoJulayi (INOMBOLO YOMnxeba EFIHLEKILEYO)
Kukho iikhosi zegalufa ezi-3 ngaphakathi kweemayile ezili-10.
Ndihlala kwigumbi eliphezulu nekati yam, ke ndiya kuba kufutshane nexesha elininzi lokuphendula imibuzo yakho, Kungenjalo uwedwa.